Chii chinonzi Genshin Impact uye kutamba sei ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Pamwe wakatoona ads Genshin Impactchero mutambo mutsva wabuda kune mobile platforms. Sekuziva kwangu, inonyanya kusimudzirwa nemablogiki ane vateereri vari pakati pemakore e13 ne27. Mamiriro acho ezvinhu anowanzo taridzika zvakanaka. Zvinondiyeuchidza nezvemazuva apo munhu wese aisimudzira Raid: Shadow Legends. Zvakanaka, mutambo uye mutambo. Zvine basa rei kwandiri, handitambe nharembozha zvachose. Asi Genshin Impact chimwe chinhu, nekuti zvinoita sekunge nyika yese iri kushushikana naye. Saka tinofanira kuona kuti imhuka yerudzii toona kuti yakakodzera here.
Mabviro emutambo uyu anozobuda pachena achangoburitswa. Kukuya, kukuya uye kukuya zvakare. Kukuya ndiwo musana weGenshin Impact.. Zvirinani pakutanga, paunoda kuvandudza hunhu hwako zvakanaka. Pedzisa mishoni, vandudza hunyanzvi hwako, unganidza zvishandiso, enda kumakomba uye kurwisa maboss.
Genshin Impact - Yakakodzera kutamba here?
Chisimbiso cheGenshin Impact - Kubatanidzwa kwe "gacha". Chaizvoizvo, iwo rudzi rwemabhokisi embavha, chete nenzira yeChinese, anotengwa nemari chaiyo. Ane zvinhu zvakawanda zvinofadza. Kune mushandisi inzira yekugonesa hunhu nekukurumidza, uye kune vanogadzira inzira yekuita mari purojekiti. Pakazara, hapana chinoshamisa. Nekuti kana uchida, haugone kushandisa mabhokisi, uye uwane zvese uri wega. Asi iwe unoda kusvika pakurwa nekukurumidza, handiti?
Kutamba Genshin Impact Zviri nyore kwazvo. Kunyangwe iwo muchinjika-chikuva chimiro, zviri pachena kuti chinokosheswa nevagadziri nharembozha. Izvi zvinoratidzwa neauto-inongedza uye yakapusa mechanics inobvumira kunyangwe gore kuve imba. Ini ndiri kuwedzeredza, hongu, asi hardcore gamers uye mafani eiyo yekutanga "Linear" pamwe havangade izvi. Iyo iri nyore kwazvo, asi zvakare ine mavara akanyanya, ine nyaya uye maitiro.
Kurerutsa kwemutambo hakusi kwega, asi boka. Ehe, iwe unotamba semutambi wakasarudzika, asi kune akati wandei shamwari dzinofamba newe, dzaunogona kushandura kune dzakaoma mamiriro. Somuenzaniso, muvengi wako anokupedza, asi iwe haudi kukundwa. Muchiitiko ichi, iwe unongofanira kushandura muporesi uye kudzorera hutano hwehukuru hwako, sezvo munhu mukuru anonzi muRPGs.
Dhawunirodha Genshin Impact ye Android
Isa Genshin Impact inogona kuiswa paanenge chero Android nharembozha. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kudhawunirodha kubva kuGoogle Play kuburikidza neiyi link. Android 5 uye zvishandiso zvitsva zvine kanenge 2GB ye RAM zvinotsigirwa zviri pamutemo. Saka mutambo wakanaka wepasirese. Usatya uye unzwe wakasununguka kupinda, iwe unosvika pane peji remutambo mune yepamutemo Google dhairekitori, saka pane zero mukana weTrojans nemavhairasi.
Uye ndizvozvo download Genshin Impact padivi muchimiro che APK mafaera, ini handikurudzire, nekuti nenzira iyi unozviratidzira kune njodzi isingakoshi yehutachiona. Kunyangwe iwe uchida kuwana yakatsemuka vhezheni yemutambo, zviri nani kuti usaite. Chekutanga pane zvese, nekuti hazvina kunaka kune mugadziri uye kufarira kwemutambo kwakarasika. Uye chechipiri, nekuti handisati ndaona shanduro yakachengeteka nayo mabhokisi emahara emahara.. Muchidimbu, usaisa pangozi.
Wongororo pamusoro peGenshin Impact
Kana iwe uchifarira, Zvakakodzera here kuisa Genshin Impact, wobva wayera mutambo paGoogle Play uye ingoverenga wongororo. Panguva yekubudiswa, kureva Genshin Impact Score - 4,1 kubva pa5. Ichi ndicho chibodzwa chepamusoro, nokuti mitambo yakawanda uye zvikumbiro zvakanangana nevateereri vakawanda - uye Genshin yakadhindwa kanopfuura mamiriyoni gumi - inowanzova nechiyero chakaipisisa. Hongu, vanotsoropodza, asi havana kusimba zvakakwana kuti vadzivise kutamba.
Mutambo uyu wakanaka: mavara anonakidza, inotonhorera uye ine hungwaru nyaya, inoyevedza marongero. Dzimwe nguva ndinongomhanya kutenderera pasirese pasina chinangwa, kuongorora nzvimbo uye ndinogara ndichiwana chinhu chitsva. Asi murume ... izvi zvipembenene uye zvipingamupinyi zvinoparadza zvese nguva pfupi yadarika: panguva yekuyedzwa ndinofanira kumirira muvengi kweinenge miniti kana kupfuura, ipapo miyedzo yenguva ... hauzive kwekumhanyira, ikozvino ndavhura. inazuma uye idambudziko rakazara ... saka ndapota vagadziri vashande pazviri.
Mutambo wacho unotyisa chaizvo. Nyika yakasimukira, mavara, nhoroondo, mabasa mazhinji. Ave negore chairo achitamba, haasati anzwa kuda kuenda. Handisati ndapa kamwe chete gore rino, asi ndine mapapu gumi nemaviri ari muruoko. Zvakare, kana mafoni ako akasadhonza Genshin kunyangwe pane mashoma marongero, dambudziko riri kure nazvo. Mutambo unoshamisa wakagadziridzwa unofanirwa kudhonza kunyangwe papombi, kana uine yakanaka internet yekubatanidza uye humwe huchenjeri hwekugadzirisa magirafu kune chako kifaa.
Vanodiwa vagadziri, mutambo wakanaka, asi pane mapoinzi asina kunaka. 1) inokanganisa chokwadi chokuti mumwe mutambi akapfuura neAsia, uye mumwe ikoko, semuenzaniso, kuburikidza neAmerica, uye pamwe chete havagoni kutamba nenzira ipi zvayo (kwandiri, ichi chigumbuso chikuru). 2) Mutambo unowanzotanga kunonoka kana kusatanga. Zvizhinji kana zvishoma, kana yekutanga minus ichigadzirisa, t ichave yakanaka :)
Genshin Impact haizoburitswa.
Hazvishamisi kuti vashandisi vanyunyute kuti kazhinji Genshin Impact haina kutanga. Mumamiriro ezvinhu aya, kazhinji zvakaoma kufungidzira nzira yakarurama yekuita kugadzirisa kukanganisa. Iko hakuna chaiyo-saizi-inokodzera-yese mhinduro. Zvisinei, chimwe chinhu chinogona kuitwa.
Chinhu chekutanga kuita kuedza bvisa cache yemutambo:
Enda ku «Zvirongwa» - «Zvishandiso»;
Tsvaga uye vhura iyo Impact Genshin tab;
Mufafitera rinovhurwa, sarudza chikamu cheMemory;
Skroka pasi uye worova 'Bvisa cache'.
Sezvineiwo, nzira iyi ndiyo inonyanya kushanda. Izvi zvinonyanya kuitika nekuda kwekurodhazve nguva nenguva kwezvikamu zvakasiyana nemutambo.
Yechipiri nzira ndeyekuisa zvakare mutambo. Ndinodaidza nzira iyi nzira yakanyanyisa nekuti Genshin Impact inorema yakawandisa uye iwe unofanirwa kushandisa yakawanda traffic kuti uidhawunirodhe zvakare, kunyanya kana uine huwandu hushoma hwetraffic. Asi, kana mutambo ukasamhanya, ingo bvisa uye uiise zvakare. Ingoshandisa iyo yepamutemo Google Play kugovera uye dzivirira iyo APK shanduro.